Allgedo.com » 2011 » March » 16
Home » Archive Daily March 16th, 2011 Gabayga Gunnimodoon – By Abwaan Abudulaahi Y. JAMA (Abdullahi Isim)/Akhriso ama Dhageyso… Mar 16, 2011 Asc dhammaan aqristayaasha webkan. Allaah baa mahad dhammaanteed leh(SWT), Rasuulkiisaa sharaf leh (NNKH).
Waxaan halkaan idiin ku soo gudbinayaa Gabaygan Hoos ku xusan. Gabaygan ayaa si toos ah ugu socda Beesha Dir waqooyi. Magaca gabayga ayaa ah GUNNIMO DOON. Ujeedada iyo macnaha waxaad kaga bogan doontaan Aqris iyo dhegaysi hadba kaad doontaan. Adinkoo mar walba mahadsan.
Waa kan gabaygii Gunnimo... Qeylo dhaan: Xaaladda Soomaalida ku sugan Liibiya iyo xuduudaheeda Mar 16, 2011 Marka hore Allah Mahad Leh: Dagaalka iyo xaaladda xasilooni daraanta ka jirta Dalka Liibiya ayaa lagu tilmaami karaa mid culeeyskeeda leh isla markaana halisteeda leh kana baxday gacan ku heeyntii iyo hanaankii dawladnimo. Waa goob qasan oo Kooxo dagaalamaayo, burcad iyo kooxo si gaar ah u u gaarsanaaya dadka Afrikada madoow ka soo jeeda ayna ka
mid yihiin Dadka Somaaliyeed oo tiraada badan leh... Abuu Muscab “Hadda laga bilaabo Weerar baan ku nahay AMISOM iyo Dowladda”. Mar 16, 2011 Afhayeenka ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa faah faahin ka bixiyay dagaalo culus oo ay xalay ku qaadeen fariisimo ay magaalada Muqdisho ka joogeen ciidanka dowlada KMG ah iyo kuwa AMISOM.
Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab oo shir jaraa’id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xalay ay weeraro saf balaaran ah ku qaadeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda KMG ah isla... Deegaanka Diif oo markale ka baxay gacanta Axmed Madoobe. Mar 16, 2011 Warar faah faahsan ayaa kasoo baxaya dagaalo kooban oo maanta ka dhacay deegaanka Diif ee gobolka Jubbada Hoose oo ay dhawaan ku dagaalameen ciidamada maamulka Jubbooyinka iyo kuwa raacsanaa Axmed Madoobe.
Boqolaal ka tirsan ciidamada maamulka Islaamiga Jubbooyinka ayaa dhowr jiho ka galay tuulada Diif Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen ciidamo taabacsan Axmed Madoobe.
Madhicin... Ra’iisul Wasaaraha Soomaliyeed oo shir Teleconfrence ah kagala qeyb galay Jaaliyadda Reer Columbus, Ohio ee dalka Mareykanka Mar 16, 2011 Maalin-nimadii shalay ayaa waxaa magaaladda Columbus, Ohio ee cariga Mareykanka ka dhacay Shir ay isugu yimaadeen Hoggaamiye dhaqameedyada bulsha weynta reer Columbus, Ohio oo ula jeedadiisuna aheyd xaaladda dagaalka iyo tan abaaraha ee ka jirta Soomaliya.
Waxaa nasiib wanaag ahaa in Ra’iisul Wasaaraha Sooomaliyeed Mudane Maxamed Abdullahi Farmaajo uu kagala qeyb gayb galay shirkaas qaab Teleconference... Radio Allgedo/ Waraysiyo